တစ် ဦး ကလူ Solo အလေ့အကျင့်နှင့်အတူစမ်းသပ်မှု - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက် Porn တွင်
ကျွန်တော်အနည်းငယ်သောအရာများကိုပေါင်းစပ်လိုက်သည်။ တစ်ကိုယ်တော်အရာအားလုံးကိုဖတ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည့်အရာနှင့်သာသွားသည်။ ငါ 6th ထုံးတမ်းနှင့်အတူစတင်ရန်ထက်အခြားပြည့်စုံအစီအစဉ်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ရလဒ်များမှာ -
ငါ (ငါသိပေမယ့်အမှုအရာထိန်းချုပ်မှုထဲကရတယ်လျှင်ကောင်းစွာ, ငါသည်စိတ်မပူပါနဲ့ချင်ခဲ့ပါဘူး!) ဝတ်လစ်စလစ်ချွတ်စတင်
ငါ 6th တိဘက်ထုံးတမ်းစဉ်လာနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ဒါကို ၅ ကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ် ငါကတစ်ချိန်ကများသောအားဖြင့်လုံလောက်သောကပြောပါတယ်ငါသိ၏။ ကောင်းပြီငါဖြစ်စေမှာမလုံလောက်ဖြစ်ကြောင်းကို, ပဲပိုပြီးအလေ့အကျင့်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ငါ့လိင် "စွမ်းအင်" လမ်းအရမ်းမြင့်မားခဲ့သည်။ ငါသွားနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကတော့ ၅ ခုဖြစ်တယ်။ ငါအဆုံးမှာအသက်ရှုမှုဟာများသောအားဖြင့်ပြန်လာတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သင်ရှူရှိုက်မိသောအခါ ABS နှင့်ရင်ဘတ်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းဖြင့်အသက်ရှူမြန်စေသည်။ ဒါကငါ့ကိုနည်းနည်းဖြေလျော့ပေးခဲ့တယ်။
ထို့နောက်ငါကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ Cross-အတော်များများကမျက်စိထိုင်တော်မူ၏။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲကယ့်ကို (အလေ့အကျင့်များ၏အခြား) Own-ခန္ဓာကိုယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂ၏စိတ်ကူးကြိုက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်၏အတွေးအလွန်အားကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအလိုဆန္ဒတစ်ဝက်လမ်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါ၏အလိင်တံကိုကိုင်ပြီးလာနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ငါသည်ဤအန္တရာယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသိသည်။ ငါချော်ပဲအရှိကို, ငါ့ဦးနှောက်ကိုထုတ် masturbate နိုင်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။
ငါ 6th ရိုးထုံးတမ်းစဉ်ပြုမိဘဲလျက်ဤနေရာတွင်ကူညီပေးခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ငါ masturbating မရှိဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုင်ပြီးကြိုးစားသင့်ကြောင်း, ဤအတှေးအလာပြီခဲ့သညျ။ နောက်တဖန်ငါ (စူပါ horny) နှိုးပြီးမကောင်းတဲ့ပြည်နယ်၌ရှိ၏အကြောင်းမရှိဆုံးရှုံးဖို့ဘာမျှရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ငါဟာခြေထောက်တွေကိုထိုင်လျက်ထိုင်လျက်ထိုင်နေသည်။ အခြားလှုံ့ဆော်မှုလည်းမရှိ၊ ရွေ့လျားခြင်းလည်းမရှိ။ မျက်စိကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်၊ အဲဒါကမြင်နိုင်ဖို့လွယ်ကူစေတယ်။ ငါနှာခေါင်းမှတဆင့်အတွက်အသက်ရှူငါ့အနက်ကိုပြု၏။
ငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်းမှာစတင်နှင့်ငါ့လိင်အင်္ဂါမှဆင်းရွေ့လျားငါ့အသက်ရှင်လျက်မြင်။ ငါလမ်းမှတဆင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှီတိုင်အောင်ငါ့ဦးခေါင်းထိပ်ကနေနေပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပါဘူး။ ငါက start ဖွဲ့စည်းရန်ငါလမ်းနောက်တစ်ကြိမ်ပြုမည်ထင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလိင်အင်္ဂါကိုအာရုံစိုက်ပြီးအဲဒီမှာ "အသက်ရှုခြင်း" ကိုမသိမ်းမချင်းငါအထိနက်ရှိုင်းစွာရှူရှိုက်မိသည်။ အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော့်ကျောရိုးကို ဦး ခေါင်းပေါ်တက်လာတဲ့“ အသက်ရှုခြင်း” ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ရင်းပါးစပ်ကနေရှူရှိုက်လိုက်တယ်။
အချိန်ကောင်းတစ်ဦးငွေပမာဏကိုကိုယ်အဘို့ကိုင်ထားစဉ်ငါသည်ဤစက်ဝိုင်းအသက်ရှူပြုလေ၏။ ငါသေချာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမရဖြစ်၏။ ငါအချိန်ခြေရာခံဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့် 10 မိနစ်ကျော်ပါပြီနိုင်ဘူး။
ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတစ်ဆင့်“ အလွန်ခံစားရသည်” စတင်ခဲ့သည်။ အပျော်အပါးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးကျွန်တော် ဆက်၍ အသက်ဆက်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကဒီအချိန်မှာငါနူးညံ့လာတယ်။ ငါအပြည့်အဝစိုက်ထူခြင်းနှင့်လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်နေထွက်စတင်ခဲ့သည်။ ဒီအသက်ရှူခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကြောင်းကိုမေ့သွားခဲ့တယ်။ ငါတကယ်လုပ်ခဲ့တယ် ဒီအပြောင်းအလဲကိုနောက်မှမစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလိုလားတောင့်တမှုသည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။
အဆုံးမှာငါလုံးဝနီးပါးပျော့ခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ ကျွန်တော်မျက်စိကိုဖွင့်ပြီးစက်ဝိုင်းထဲစီးဆင်းနေသည့်အသက်ရှူမှုကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်ခန္ဓာမှတဆင့်မြင်ယောင်လာသည်။ ငါ့လက်က Pre-cum နဲ့ဖုံးတယ်ဆိုတာငါသိတယ် ဒီဟာကိုငါမနှောင့်ယှက်ခဲ့ဘူး ငါတကယ်ကောင်းတယ်ခံစားရတယ် ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန်ဓာဟာတရားစွဲနေပုံရတယ်။ ငါပြည့်နေပြီ၊ ငါပြောနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး ငါထို့နောက်နောက်ခြေလှမ်းသို့သွားကြ၏။
ဆဲကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ Cross-အတော်များများကမျက်စိထိုင်လျက်နေစဉ်, ကိုယ့်ကိုငါ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြေလျှော့ကြကုန်အံ့။ ငါသည်ငါ့ရင်ဘတ်ငါ့မေးစေ့ကျဆင်းသွားနှင့်ငါ့မျက်စိကိုပိတ်။ ငါ့ကိုလျှော့ပေါ့ပေးမည်ဟုတိုင်းကြွက်သားကြကုန်အံ့။ ငါသည်ငါ၏စိတ်ကိုဖြေလျှော့ကြကုန်အံ့။ တဖန်ငါအချိန်ခြေရာခံဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါကအနည်းဆုံး5မိနစ်ဤကဲ့သို့သောခဲ့ယူဆ။ ဒါဟာလာပါခံစားရတယ်။
ငါကထဲကငါ့ကိုဆောင် သွား. အဘယျသို့သေချာမဖွစျ၏။ ငါထင်နာရီအဲဒီမှာထိုင်လျက်ရှိသည်ဟုနိုင်ဘူး။ ့သားအပေါငျးအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအကြောင်းကိုခဲ့ပြီးနောက်စိတ်အေးလက်အေးရှိ setting ။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုသွားကြောင်း, ငါကောင်းသောခံစားရတယ်။
ဒါနဲ့ငါ့စမ်းသပ်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ပုံရသည်။ ဒီနံနက်တိုင်းခဏတာစမ်းကြည့်ပြီးရလဒ်တွေကိုကြည့်ပါ့မယ်။ ငါမိနစ် ၃၀ စောစောထပြီးဒီအလေ့အကျင့်ကိုစတင်ပါတော့မယ်။ ဖြစ်ကောင်းငါအနည်းငယ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ငါမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါအနည်းဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မယ်။ ဒီဟာကိုကျွန်တော့်အတွက်အောင်မြင်စေချင်တယ်
ငါလိင် "စွမ်းအင်" အားလုံးမဟုတ်ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို "ထိန်းချုပ်ထား" နဲ့တူဒါဟာပိုပြီးခံစားရပါတယ်။ ငါအခုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့ဒီအလိုဆန္ဒမရှိဘူး။